Final Table: sei kusvika kune yekupedzisira tafura yemitambo ye poker
Wakambozvibvunza here nzira yekuenda kune yekupedzisira tafura yemitambo ye poker? Edza kushandisa iyi nzira uye iwe uchaona izvozvo ne Final Table kushamisika hakuzove kushaikwa!
Neiyi nyowani software ini ndinopa kwauri chimbo chekuyedza kuwana zvakanyanya uye kazhinji kune iyo yekupedzisira tafura yepamhepo poker makwikwi kupa nguva yakaoma kunyangwe kune nyanzvi chaidzo!
Final Table: mavambo enzira
Iyi yemitambo system yakafuridzirwa nenzira yakakurumbira yaDavid Sklansky.
Kana iwe wanga usingazive iyi nyaya, ziva kuti zvese zvinotanga pazuva iro mutambi ari wemasvomhu David Sklansky, akadaidzwa neshamwari yake, muridzi wemakasinasi akasiyana siyana muLas Vegas: iko kufona kwaive kwekukumbira rubatsiro kudzidzisa mwanasikana weiyo tycoon, tichifunga nezve mutambo uri pedyo weWSOP inozivikanwa (World Series of Poker).
Yakanga isiri basa riri nyore, kure nazvo! Sklansky saka akafunga kugadzira yakapusa uye nekukurumidza kudzidza nzira, iyo chero munhu aigona kutevera, yakavakirwa (yakavakirwa patafura) chete pazviito zviviri zvinogona kuitika: allin kana peta.
Nezvese zvese nezve nzira yekutanga yaSklansky, ndinokukoka kuti utsvage nyore paGoogle.
Maitiro akatsanangurwa pano, kune rumwe rutivi, ane zvakafanana naSklansky chete iyo chokwadi chekubvuma (asi chete mune makumi masere muzana ezviitiko), zviito zviviri zvakafanoona fold / allin asi, sezvatichaona munguva pfupi, zvinoenderana kwakasiyana kwazvo kufunga.
Pfungwa iri seri kwenzira iyi inobvumidza avo vanoishandisa kubvisa kunyange vatambi vakanakisa, ichivashaisa mukana wega wega mumutambo wekutamba uye kubvumira kunyangwe vasina ruzivo kurova vatambi vane hunyanzvi.
Final Table: Lmune kufunga kwezano
Chinangwa che Final Table, ndeye iyo svika iyo yekupedzisira tafura kusara zvachose paavhareji (avhareji) nemachipisi uye pamusoro pezvose kutamba nemaoko mashoma sezvinobvira.
Sei? Icho chikonzero chiri nyore: kana iwe uine mairi maviri, iwe unofanirwa kuziva kuti kana iwe ukapinda zvese mukati uye anopikisana anokufonera neKK, une mukana unosvika makumi masere muzana mukana wekuhwina.
Kuva nemakumi masere muzana mukana padivi rako wakanaka, asi izvi hazvireve kuti uchahwina 80%, asi panzvimbo pe100%, izvo zviri paavhareji kagumi kamwe chinhu ichi chichiitika, iwe uchakunda kasere uye ucharasikirwa ka80.
Mumutambo, kusiyana nemutambo wemari, kurasikirwa neainini zvinenge nguva dzose zvinoreva kubviswa, saka kunyangwe kana uine maAce maviri, iwe unofanirwa kuziva kuti uchafanirwa kurasikirwa paavhareji kanokwana kamwe kana kashanu uchipesana nemutambi ane chero imwe. vaviri.
Pakupedzisira ipapo, kana ukatamba zvishoma, newewo hausi mukana wekusangana neruoko runokuburitsa.
Asi ndeipi nhamba shoma yemaoko yaunofanirwa kutamba kuti uite kune yekupedzisira tafura yemakwikwi?
Ungasvika sei patafura yekupedzisira yemitambo ye poker: iiyo nhamba yakapetwa kaviri
Kuti tinzwisise zviri nani pfungwa, ngatitorei muenzaniso unoshanda: mumutambo wepamhepo nevatori vechikamu chiuru uye chiuru nemazana mashanu ekutanga machipisi, tichava neavhareji yemachipisi patafura yekupedzisira (kana akaumbwa nevatambi vapfumbamwe), ichave (chiuru * 1.000): 1.500 = 9 machipisi.
Mubvunzo wakakosha ndewokuti: mangani maoko andichafanirwa kutamba 'zvirinani' kuti ndisvike iyo stack?
Mhinduro yacho yakapusa: ingori maoko manomwe (uchiwedzera 7 * 1.500 * 2 ... unodarika 2 mushure memakumi maviri nemaviri-maviri).
Zviripachena nekuda kwezvikonzero zvakawanda iwe haumbofi wakakwanisa kuita zvinoteedzana zvakapetwa-mbiri uye yako yese stack asi asi, sezvauri kuona, kugona kutamba uye kungoita chete mairi mairi-maviri, unogona enda kutafura yekupedzisira!
Chirongwa chandakagadzira chinopa zano chairo kuzadzisa ichi chinangwa.
Chaizvoizvo ini ndasarudza akateedzana mawoko kuti aridzwe anenge chete mune allin zvichibva pahuwandu hwevashori vanopikisa patafura.
Sarudzo ndeyekuti ne Final Table isu tinenge nguva dzose tine huwandu hwenhamba pamusoro pevashori vedu, mupfungwa yekuti mumiririri wedu, achidana allin yedu, anowanzova pakaipa pane mukana, saka zviri pachena kuti bhodhi rinogona kupa kushamisika kunofadza kana kwete, asi preflop isu tinotanga kazhinji kazhinji pane zvakanakira kana zvisina kunaka uye izvi mukufamba kwenguva zvinoreva kuwana!
Nzira yekusvika sei kune yekupedzisira tafura yemitambo ye poker: mutambo loose kana yakasimba?
Con Final Table sezvo danda rako richidzikira nekuda kwemapofu maererano nevhareji, mutambo wako unosununguka (kuvhurika), nepo kana uri paavhareji kusarudzwa kwemaoko kuti upinde nawo kunenge kuri kuderera (kutamba kwakasimba).
Zvakare, kusiyana neSklansky nzira, iwe unozotambawo mamwe mawoko uchiona iyo flop uye uchifunga kuti ungapinda here kana kupeta zvinoenderana.
Kunyangwe iri nzira yakapusa kutevedzera, iwe uchaona kuti zvinoda kurangwa kwakasimba kuishandisa uye hazvisi nyore zvachose kusaedzwa nevamwe vari kunze kwebhokisi, kunyanya kana uchinge wasara uine machips mashoma uye uchipihwa ruoko rwunoita serwakanaka asi rwuchakurumidza kuve rwakaipa kupfuura rweuyo anopikisa anozofona, ndokuti, zvakaringana kubviswa.
Panzvimbo pekuita kuti stack irasike kubva kumapofu kusvika kumagumo, asi usamboita matanho asingafanoonekwi na Final Table, edza uye iwe uve nezvimwe zvinoshamisa zvinoshamisira!
Zviripachena kamwe yakasvika patafura yekupedzisira unofanira kusiya nzira uye tamba nepaunogona napo, uchiziva kuti uchitova nechivimbiso chigaro chigaro.
Mushure meiyi sumo inodiwa, ngationei pakupedzisira kuti chirongwa chinoshandiswa sei.
Kushandisa sei Final Table
Ichi ndicho chikuru skrini, pamwe neicho chete che Final Table.
Chikamu chiri kuruboshwe chine rondedzero yakatwasuka yemaoko chete aunogona kutamba (kubva paA9 kusvika paAA saka).
Kuti ushandise chirongwa ichi, ingoisa stack yako mu 'sitaki'patinogamuchira imwe yemaoko aya uye avhareji teki yemutambo mupaneru'AVG', iyo inogona kuwanikwa zvirinyore mune chero poker kamuri nekudzvanya pane ruzivo ruzivo rwenhabvu.
Paunenge iwe waisa aya maviri data, ingotinya pane bhatani Tarisa Kurwisa! uye imwe yemakoramu gumi machena ichapenya mune rimwe ruvara uye inoratidza izvo chiito chako chinofanira kuva.
Saka kana iwe uri pakutanga kwemutambo uine mazana mashanu emadhaki uye avhareji (AVG) yemakwikwi i1500 uye unogashira KK uchagadzirisa zvinotevera:
kana mushure mako vatambi vanopfuura vatanhatu vachifanira kutaura (ndinokuyeuchidza kuti chirongwa ichi chakaenzanisirwa chete makwikwi ane matafura evatori vechikamu 9 kusanganisira iwe) uchafanirwa kupeta (ehe wakazviwana nenzira kwayo, peta KK uye kanganwa nezvazvo);
kana vatambi vatanhatu kana vashoma vachifanira kutaura mushure mako, enda mukati mese pasina kunonoka.
Ndizvo zvose! Izvo zvakafanana zvinoenda kune mamwe ese maoko, ingoisa stack yako, avhareji stack uye tinya pane cheki bhatani; zvinoenderana nekoramu inopenya, iwe uchaverenga yakatwasuka (zvinoenderana nenhamba yevatambi vasati vataure) zvaunofanira kuita.
Cont vatambi vanoshanda vari patafura
Kana nemukana pamberi pechinhanho chako kwave kutokwidziridzwa kana allin, uyu mutambi (kana izvi kana anopfuura mumwe), anoverengwa sekunge achazotaura mushure medu, saka, kudzokera kumuenzaniso uri pamusoro, kana iwe une KK uye chikamu chechipiri chakavhenekerwa (semufananidzo) uye paive nekumutswa pamberi pedu uye mushure medu vatambi vashanu vachiri kufanira kutaura, 5 + 5 = 1 saka: Allin!
Kana panzvimbo pacho sepanyaya imwechete kusati kwasimudzwa uye kufona uye kana chava chijana chedu mushure mekunge vatambi vashanu vachiri kufanira kutaura, isu tine izvo: 5 (simudza) + 1 (kufona) + 1 (kusazivikanwa) = 5 uye Naizvozvo 'peta', sezvakafanotaurwa nekoramu yechipiri pamutsara wakatarisana weKK ruoko.
Zvakanaka, iyi ndiyo nzira muchidimbu, ngationei izvo izvo imwe FC ne M% tsika dzaunoona mumufananidzo zvinoshandiswa.
Ungasvika sei patafura yekupedzisira yemitambo ye poker: l'M% chiratidzo
Iyo (isingachinjiki) kukosha M% inoratidza huwandu hwesitaki yako maererano neavhareji yemutambo, saka kana yako stack iri zviuru zviviri zvemachipisi asi avhareji yevamwe vatambi i2.000, zvinoreva kuti M% yako ichave 4.000% kupfuura iyo makwikwi uye nekaviri-kumusoro kuchakurumidza nekukurumidza sezvazviri, kubva 50% pasi, mutambo wako unenge uchivakirwa pakoramu yekupedzisira kurudyi uye nekudaro ichave yakanyanya 'kuvhura' (yakasununguka).
Kune rimwe divi, kana yako stack iri zviuru zvishanu machipisi uye avhareji yevamwe vatambi ari 5.000, iyo M% kukosha ichave iri pa3.000% uye yekutanga ikholamu ichapenya, zvichikutungamira iwe kutamba yakawanda, yakawanda yakavharwa, kana ' Ultra yakasimba '.
Final Table: iiyo FC paramende
Iko FC inokoshesa zvinongoreva 'torque factor' uye inoratidza chaiyo chikamu chedu chazvino stack (5% kuve chaiyo).
Chinangwa chei? Paunobatirwa vaviri iwe unotoziva zvekuita zvichibva pamabatiro aunoziva, zvisinei, vaviri vacho vanozoshanduka voita matatu erudzi dzimwe nguva (anenge 12%), saka kunyangwe iyo pateni ikati kupeta, asi uchiona chikwapuro. zvinodhura iwe zvirinani kana zvishoma pane kukosha kwakaratidzwa neFC factor, mutemo ndewokufona.
Kana iwe ukarova matatu erudzi paflop, iwe unobva waenda allin (ndapota, hapana slowplay!) Chinhu chimwe chete kana iwe ukasavhara matatu erudzi asi vaviri vako vari pamusoro pane matatu makadhi ari paflop (muenzaniso: iwe kuva nemakumi maviri uye iyo flop inouya 2-4-8), mune dzimwe nguva dzese iwe unotarisa kusvika pazvinogona kuratidza pasi kana kupeta kubhidha remupikisi.
Nzira yekuenda sei kune yekupedzisira tafura yemitambo ye poker: money zone Calculator
Nekudzvanya pablue / yero museve chiratidzo kurudyi, diki asi inobatsira macalculator inowoneka kana kutsakatika muchikamu chezasi chechirongwa, umo nekupinda huwandu hwenhamba yevatambi mumutambo uye nhamba yezvigaro zvakabhadharwa, nekudzvanya pane bhatani reCalc AVG Stack, zvichave Zvinogoneka kuziva chaizvo staki yekusvikira chigaro chemubairo uye sitaki kutivimbisa chigaro pa yekupedzisira tafura.
Iyi dhata ichave inobatsira kwazvo mukugadzira slowplay nzira pasati pakaipa kuputika kwebhodhi, i.e. apo mutambi wekupedzisira pamberi penzvimbo yemari ichibviswa.
Maitiro Final Table zvinopera pano, zvakapusa handiti? Ini ndinokuvimbisa kuti kune chaiko huwandu hwakawanda kuseri kwayo uye kutanga kuita hushoma hwekudzidzira ini ndinokurudzira kuti uzviedze pamini sit & go makwikwi asina kana asingasviki matatu matafura (3 vatambi) chaizvo yeiyo isiri 'pfupi stack' mhando.
Iwo makwikwi ayo anonyatsokodzera zano iri zviri pachena kuti 'akadzika matura' iwo uye ane akareba kwazvo marefu mazinga (pro chimiro).
File Download	FinalTable.zip - 1 MB